DEG DEG: Degmada Waaberi oo ku Guuleysatay koobkii Cayaaraha demooyinka Gobolka Banaadir | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
DEG DEG: Degmada Waaberi oo ku Guuleysatay koobkii Cayaaraha demooyinka Gobolka Banaadir
(08-09-2017) Cayaartoyda mataleysa degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir ayaa ku Guuleystay Cayaarihii degmooyinka Gobolka Banaadir kadib markii ay 3-1 ku Garaaceen dhigooda degmada Hodan.
Cayaartaan oo ladheeley Xili habeenimo ah Markii u horeysey 27 sano kadib ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan kun oo Taageerayaal ah waxaana buuxsamay Garoonka Koonis oo lagu qiyaaso in uu qaado in kabadan Toban kun oo Taageerayaal ah.
Cayaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen 17 ka degmo ee Gobolkaan ka koobanyahay ayaa waxaa Finalkiisa isugu yimid degmooyinka Hodan iyo waaberi iyada oo ay si qurux badan ugu Guuleysatay degmada Waaberi oo ladhihi karayo waa u qalantay in ay qaadaan koobkaan.
Kulankaan ayaa qaybtiisa Hore waxaa lagu kala nastay 2-0 oo ay ku hogaamineysey degmada Waaberi oo sidoo kale qabatay Rigoore laga dhigay waxaa kaloo Roose ka qaatay Cayaaryahan.
Qaybta labaad ayey Waaberi heshay Goolka 3 aad waxaana jirtay in laga soo daahay bilaawgii qaybta labaad kadib markii sida lasheegay ay Waaberi ka doodey qaladaad badan oo uu Galay Garsoorihii Cayaartaan oo lagu Magacaabo Maxamed Soomaali kaas oo aan ilaa hada lagaranayn Sababta uu Calaamada Casaanka ah u siiyey Cayaaryahan Waaberi u dheelayey.